Football Khabar » युरोपका सर्वाधिक गोलकर्तामा रोनाल्डो शीर्ष स्थानमा : को कति नम्बरमा ?
युरोपका सर्वाधिक गोलकर्तामा रोनाल्डो शीर्ष स्थानमा : को कति नम्बरमा ?
वर्ष २०२० सकिन लाग्दा हालसम्मका सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडीको सूची सार्वजनिक भएको छ । चर्चित खेल संस्था ‘गोल’ले २०२० अन्तर्गत हालसम्मका टप–१० गोलकर्ता खेलाडीको सूची तयार पारेको छ । सार्वजनिक सूचीमा इटालियन क्लब युभेन्टसका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहिलो स्थानमा छन् ।
३५ वर्षका रोनाल्डो यस वर्ष हालसम्म आइपुग्दा युरोपियन टप–५ लिगमा कूल २७ गोलसहित सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा छन् । यस सूचीमा खेलाडीले युरोपियन टप–५ लिगमा गरेको गोल संख्या मात्रै समावेश छ । रोनाल्डोले यस वर्ष २७ गोलसहित शीर्ष स्थानमा रहँदा उनले औसतमा ७३ मिनेट बराबरमा १ गोल गरेका छन् ।
त्यसपछि दोस्रो स्थानमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखका पोलिस फरवार्ड रोवर्ट लेवान्डोस्की छन् । उनले यस वर्ष बार्यनका लागि कूल २२ गोल गरेका छन् । उनले औसतमा ६६ मिनेट बराबरमा १ गोल गरेका छन् । तेस्रो स्थानमा इटालियन क्लब लाजियोका सिरो इम्मोबिले छन् । इटालियन खेलाडी उनले हालसम्म २२ गोल गरेका छन् । उनले औसतमा हरेक १०२ मिनेटमा १ गोल गरेका छन् ।
टप–१० गोलकर्ता खेलाडीको सूची यस्तो छ:
10. Lionel Messi (Barcelona) – 15 goals (159 minutes per-goal)
9. Danny Ings (Southampton) – 15 goals (137 minutes per-goal)
8. Romelu Lukaku (Inter Milan) – 16 goals (123 minutes per-goal)
7. Mohamed Salah (Liverpool) – 18 goals (125 minutes per-goal)
6. Francesco Caputo (Sassuolo) – 18 goals (124 minutes per-goal)
5. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) – 18 goals (101 minutes per-goal)
4. Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 19 goals (81 minutes per-goal)
3. Ciro Immobile (Lazio) – 22 goals (102 minutes per-goal)
2. Robert Lewandowski (Bayern Munich) – 26 goals (66 minutes per-goal)
1. Cristiano Ronaldo (Juventus) – 27 goals (73 minutes per-goal)
प्रकाशित मिति २६ कार्तिक २०७७, बुधबार १९:२९